Deotoronomia 9: 1-29
Deotoronomia 8 Deotoronomia 9 Deotoronomia 10
Mihainoa, ry Isiraely ô: hianao izao dia efa hita an'i Jordana hiditra eo amin'ny tany ka handresy firenen-tsamy hafa, izay lehibe sy mahery noho hianao, sy hahafaka tanàna lehibe izay misy mànda manakatra ny lanitra,
Koa aoka ho fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitrao no efa handeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka Izy no handringana azy sy hampietry azy eo anoloanao; dia handroaka azy hianao ka handringana azy faingana, araka izay nolazain'i Jehovah taminao.
Tsy ny fahamarinanao, na ny hitsim-ponao, no andehananao handova ny taniny; fa ny haratsiam-panahin'ireo firenena ireo no androahan'i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao hahato ny teny izay nianianan'i Jehovah tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao.
Koa aoka ho fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no anomezan'i Jehovah Andriamanitrao izany tany soa izany ho lovanao; fa firenena mafy hatoka hianao.
Tsarovy ka aza hadinoinao ny nampahatezeranao an'i Jehovah Andriamanitrao tany an-efitra: eny, hatramin'ny andro nialanao tany amin'ny tany Egypta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'i Jehovah ihany hianareo.
Na dia tany Horeba aza dia nampahatezitra an'i Jehovah hianareo, dia tezitra taminareo Izy ka saiky nandringana anareo.
Dia hoy Jehovah tamiko: Miaingà, ka midina faingana hiala ety hianao; fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Egypta; efa nalaky nivily niala tamin'ny làlana izay efa nasaiko nalehany izy ka nanao sarin-javatra an-idina ho azy.
Avelao Aho handringana azy, ka hovonoiko ny anarany tsy ho eny ambanin'ny lanitra, ary dia hataoko firenena mahery sy lehibe noho izy hianao.
Dia nihodina aho ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra, raha mbola nirehitra afo izy; ary ny vato fisaka roa nisy ny fanekena dia teny an-tànako roa.
Ary nijery aho, ka, indro, efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitrareo hianareo ka nanao ombilahy kely an-idina ho anareo; nalaky nivily hianareo niala tamin'ny làlana izay efa nasain'i Jehovah nalehanareo.
Dia noraisiko ny vato fisaka roa ka nazerako avy teny an-tànako roa ho vakivaky teo imasonareo.
Ary raha nampandehanin'i Jehovah niala tao Kadesi-barnea hianareo ka nataony hoe: Miakara, ka lovao ny tany izay nomeko anareo, dia nandà ny tenin'i Jehovah Andriamanitrareo hianareo, fa tsy nihaino Azy, na nino ny feony.
Eny, niodina tamin'i Jehovah ihany hianareo hatramin'ny andro nahalalako anareo no ho mankaty.
Ary niankohoka teo anatrehan'i Jehovah aho nandritra izany efa-polo andro sy efapolo alina izany, satria efa nolazain'i Jehovah fa handringana anareo Izy.
Dia nifona tamin'i Jehovah aho ka nanao hoe: Jehovah Tompo ô, aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao, izay navotanao tamin'ny fahalehibiazanao ka nentinao nivoaka avy tany Egypta tamin'ny tànanao mahery.
fandrao izay monina amin'ny tany nitondranao anay nivoaka avy tany hanao hoe: Satria tsy hain'i Jehovah ny hitondra azy ho any amin'ny tany izay nolazainy taminy, ary satria nankahala azy Izy, dia izany no nitondrany azy nivoaka hahafaty azy aty an-efitra.